RASMI: Kooxda Arsenal oo la soo wareegtay laacibkii khadka dhexe ee Real Madrid, Dani Ceballos… (Lambarkee ayuu u xiran doonaa Gunners?) – Gool FM
RASMI: Kooxda Arsenal oo la soo wareegtay laacibkii khadka dhexe ee Real Madrid, Dani Ceballos… (Lambarkee ayuu u xiran doonaa Gunners?)
Haaruun July 25, 2019
(London) 25 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa shaacisay inay la soo saxiixatay Dani Ceballos, kaasoo heshiis amaah ah ay kaga soo qaateen naadiga Real Madrid ee ka dhisan dalka Spain.
Laacibka khadka dhexe ayay kooxda reer England ee Arsenal ay kula soo wareegtay heshiis hal xilli ciyaareed ah oo uu kaga soo dhaqaaqay Real Madrid.
22-sano jirkaan ayaa 56 kulan u saftay kooxda reer Spain ee Los Blancos tan iyo markii uu kaga soo biiray naadiga Real Betis sanadkii 2017-kii.
Macallinka Gunners ee Unai Emery ayaa horay u ammaanay qaab ciyaareedka Dani oo uu ku sheegay mid aad u sarreeya isla markaana uu leeyahay hibo gaar ah, maadaama uu garanayey illaa waqtigiisii Real Betis iyo Real Madrid.
Kooxda Arsenal ayaa sidoo kale la filayaa inay la saxiixato difaaca dhexe naadiga Saint-Etienne ee William Saliba oo 18-sano jir ah kaasoo la filayo inuu ku kici doono adduun dhan 27 milyan oo gini.
Da’yarka xulka qaranka France ayaa dib ugu laaban doona kooxda Ligue 1 heshiis amaah ah xilli ciyaareedka soo socda ka hor inta uusan ku soo biirin kooxda Gunners sanadka 2020-ka.
Ceballos ayay kooxda reer London ee Arsenal xaqiijisay inuu u xiran doono maaliyadda lambarka 8-aad xilli ciyaareedkan, waxaana uu kulankiisa ugu horreeya uu u safan karaa kooxdiisa cusub ee Gunners ciyaarta ay Axadda ka hor jeedaan Naadiga Lyon ee Emirates Cup.
Sarri oo go’aamiyay goolhaayaha koowaad ee Juventus xili ciyaareedka cusub, kaddib soo laabashada Buffon
Shaxda ugu adag ee laga sameeyey xiddigaha dhashay bisha April ee sanad kasta… (Yaase keydka ugu jira?)